Bamchome olwegwalagwala uphromotha uMagudulela - Bayede News
Home » Bamchome olwegwalagwala uphromotha uMagudulela
KUNGAKAPHELI sikhathi esingakanani engene emsebenzini wokuqhatha izimpi zabashayisibhakela, iningi labathandi bezamankomane selimfanisa nedlanzana lo phromotha abangomakadebona abanjengoDonald King wase-USA wodumo lokuqhatha izimpi ezinjengeThe Rumble in the Jungle neThrilla in Manila.
UThulani “Sir” Magudulela weLudonga Boxing Promotions kuleli sekunalabo abamfanisa nomqali wendlela kophromotha boHlanga uMzimase “Bra Mzi” Mnguni wase-East London, e-Eastern Cape ongumnikazi we-Eyethu Boxing Promotions. UMnguni uzakhele ugazi nodumo ngokukhiqiza izingqwele ezinjengoVuyani “The Beast” Bungu, uWelcome “The Hawk” Ncitha, uZolani “Last Born” Tete, u-Ali “Rush Hour” Funeka, uSimphiwe “V12” Vetyeka ukubala ezimbalwa.
Phakathi kwempumelelo eyenza uMagudulela odabuka esigodini iMaphophoma, KwaNongoma angaconsi phansi wukuqopha umlando ngokuthi iKwaZulu-Natal ibe nompetha wokuqala webhande lakuleli lo sondonzima. Lapha kukhulunywa ngoWiseman “Sabalutho” Dlomo owanqoba lesi sicoco ngowezi-2011. Abanye ompetha abakhiqizwe nguMagudulela oqale ngokuqeqesha ngaphambi kokungena ekuqhatheni izimpi, ngoChristopher Buthelezi obephethe ibhande lakuleli le Middleweight, u-Innocent Mantengu oyingqwele ye-IBF Continental Africa Super Bantamweight ukusho abambalwa.
Ubuchule balo mqhathi benze abaqeqeshi bezinga eliphezulu abanjengoNick Durandt ongasekho beze bebuthelana kuye befuna ukusebenza naye. Ngenxa yokuba namava ayisimanga ngowezi-2010 uklonyeliswe ngendondo yokuba uphromotha obashaye bonke emakhanda kuleli. Ngaphandle kokukhiqiza osomankomane uphinde waphendula indodana yakhe uZwilenkosi Magudulela uqweqwe lo mqeqeshi olusebenzisana naye ngaphansi kweThekwini Gym ukukhiqiza ompetha. Ezimpini eziningi ezenziwe yiLudonga ezinye ezingasoze zalibaleka kube ngekaDlomo anqobe kuyo ele heavyweight, ekaThabiso “The Rock” Mchunu ayebanga kuyo ibhande lakuleli leCruiserweight, uButhelezi abevikela ibhande lakhe kuzo.
Lo mqhathi wathi esebona ngowezi-2014 ukuthi uMoruti “Baby Face” Mthalane ulengela engozini yokwephucwa ibhande le-IBO Flyweight wenyuse izinga le layisensi yeLudonga yokuqatha wayibeka ezingeni lo mhlaba. Lokhu kumnike igunya lokwenza imiqhudelwano emithathu lapho uMoruti abevikela khona ibhande lakhe. NgoNhlaba wezi-2015 iLudonga iqophe umlando yenza umqhudelwano obekukhona kuwo impi yokuhlungela ukulwela ibhande elihlonishwa kunawo wonke emhlabeni leWBC Cruiserweight obekulwa kuyo uMchunu no-Ilunga “Junior” Makabu waseDemocratic Republic of Congo (DRC).
Kumanje impumelelo kaMagudulela okukhulunywa ngayo emhlabeni jikelele wukuthatha uSiboniso “Tiger” Gonya odabuka uMtubatuba ambeke ohlwini losomankomane abahamba phambili emhlabeni kuBantamweight. Sikhuluma nje, lo somankomane uthole ingqayizivele yethuba le mpi yebhande leWBO Bantamweight azozama ukulephuca kuyo uTete waseMdantsane. Le mpi izoba e-United Kingdom (UK) mhla zili-15 kuLwezi. Uma ufakana umlomo noMagudulela mayelana nempi kaGonya uthi kuthi akakhale uma ecabanga lapho ephuma khona.
UBerman uzoqhatha ezolekelela kuMnguni
“Kangikaze ngicabange ukuthi ngiyokhiqiza usomankomane oyolwela iWBO World. Okunginika ithemba ukuthi umhla zili-15 lesi sicoco sesingesaKwaZulu-Natal ukuthi lapha sikhona kasifikanga ngephutha,” kubeka uMagudulela. Ube eseveza ukuphoxeka akuthole eMnyangweni Wezemidlalo kulesi sifundazwe athi kawuyingeni eyokuxhasa uGonya njengoba eya e-UK. “Empeleni impi kaGonya noTete bekumele ilwelwe kuleli. Ngithe uma uMnyango ngiwucela ukuthi usize ekuyiletheni lapha wangena ezintangeni. No-Innocent Mantengu ngenyanga edlule bekumele avikele i-IBF Super Bantamweight kodwa kwangenzeka. Kwale noma sesiwutshela uMnyango ukuthi ikhona imali encane esinayo, mawusihlangabeze kodwa wenqaba. Abanye engibasolayo uMasipala waseMtubatuba oyekelela uGonya noMantengu phezu kokuba bengamadodana akuleya ndawo,” kuqhuba uMagudulela.
Uma lo mqhathi echaza ngokungena kwezamankomane uyabona ukuthi lo mdlalo yinto azalwa nayo njengoba ayiqala esesesikoleni. Uthi uqale engumqeqeshi kwase kuthi ngokuhamba kwesikhathi wangena ekuqhatheni ngenxa yokuphathwa kabi ukubona osomankomane bakuleli befudukela koGauteng, e-Eastertn Cape nakwezinye izifundazwe ngenxa yokungazitholi izimpi. Uthi ngenxa yokukhonza lo mdlalo uxabane kaningi nezikhulu zeBoxing South Africa (BSA) ngenxa yokugxamalaza eba ngumqeqeshi aphinde abe umqhathi.
“Ngomunye unyaka iBSA yaze yangibizela umhlanganweni. Ngaleso sikhathi bekusenzima izimpi ngisaziqhathela eVictoria Mxenge Hall, eMlaza nasetendeni likaMfundisi uVusi Duma elalise-Albert Park, eThekwini. IBSA yangichazela ukuthi ukuba ngumqeqeshi nokuphinde ngingene nosomakomane eringini njengomqeqeshi kakuvumelekile. Ilapho engaqala khona nganxenxa abantu abafana no-Alex Mchunu, u-Obed “123” Gumede, uMboneni Dlamini, indodana uZwilenkosi nabanye abaningi ukuthi baqale ukuqeqesha,” kubeka lo mqhathi. UMagudulela ube esecela ukuthi ezamankomane kuthelevishini zibuyiselwe ekubonisweni ngemuva kukanobhuthuzwayo ngezimpelasonto ukuze kuzobuya abaxhasi. Lo phromotha ofunde eMaphophoma Primary School naseHambangendlela High School, KwaNongoma; uganiwe unezingane ezili-14.
Bayede News Nov 17, 2017